Hazie smartwatch China ka idozi nsogbu na ọkwa | Gam akporosis
Eder Ferreño | | China gam akporo, smartwatch, Nkuzi
Ọ bụrụ na ọ bụ naanị awa ole na ole gara aga, egosiri m gị Nyocha nke Iradish X9 Y6, ndị dị otú a Apple Watch mmepụta oyiri dakọtara na gam akporo na iOS na na anyị nwere ike inweta ihe na-erughị 30 Euro, ugbu a ọ bụ oge mgbazi na mmekọrịta nke ọkwa, yabụ aga m egosi gị otu kwụsị nsogbu nke ificationsma Ọkwa na a Smartwatches ndị China nke ahụ dabere na ngwa Bluetooth Notifier.
Ihe ngwọta a maka nsogbu nke ọkwa na Chinese Smartwatches nke na-apụtakarị anyị na njikọ nwere smartphones nwere ụdị nke Android Lollipop, bụ dị irè maka ụdị na ụdị ndị China niile nwere nke na-eji ngwa Bluetooth Notifier, nke na-enye ọtụtụ nsogbu nke na ọ naghị emekọrịta ọkwa ahụ anatara.
1 Otu esi edozi smartwatch nke China ma dozie nsogbu ọkwa
2 Etu esi edozi smartwatch nke China
3 Etu esi ejikọ smartwatch ndị China na gam akporo
4 Ezigbo ngwa smartwatch nke China
5 Ihe ngosi BT
Otu esi edozi smartwatch nke China ma dozie nsogbu ọkwa
Na vidiyo etinyere na nkụnye eji isi mee nke isiokwu a, m na-egosi gị nzọụkwụ site na ngwọta nke nsogbu nke ificationsma Ọkwa na Chinese Smartwatches. A ngwọta na dị mfe dị ka iwepu ihe ngosi Bluetooth na ịwụnye Smartwear, otu n'ime ngwa maka Chinese Smartwatch nke dị kpamkpam na Google Play Store site na ịpị njikọ m na-ahapụ n'okpuru.
Site na ntinye nke smartwear na iwepụ nke Bluetooth Notifier anyị ga-agbazi niile ngosi mmekọrịta nsogbu na ụdị niile na ụdị nke smartwatches China nke jiri Bluetooth Notifier mee ihe.
Uwe Ọ bụ otu n'ime ngwa kachasị mfe maka smartwatch China ka ị jiri wee hazie, dị ka mfe ma ọ bụ karịa Bluetooth Notifier na nke anyị ga-enweta mmekọrịta nke ozi niile na-erute anyị na Smartphone jikọtara ya na Smartwatch, ọ bụ ezie na site na ntọala nke ngwa ahụ, anyị ga-enwe ike nyocha nyocha site na ngwa ka anyị wee nata naanị ọkwa nke ngwa ndị masịrị anyị.
Agbanyeghị na nseta ihuenyo ndị a sitere na Playlọ Ahịa Google, ị hụrụ na ngwa ahụ pụtara na Chinese, nke bụ eziokwu bụ na A sụgharịrị ya n'ụzọ zuru ezu n'asụsụ Bekee ọ na-arụ ọrụ nke ọma ma dịkwa mfe nghọta.
Etu esi edozi smartwatch nke China
Mgbe anyị na-azụta ihe nkiri cino smartwatch, otu n’ime nkọwa mbụ na anyị kwesịrị iburu n’uche bụ sistemụ arụmọrụ ị na-eji. N'ọtụtụ ọnọdụ, ụdị na-ịkụ nzọ na Wear OS, sistemụ arụmọrụ nke Google mepụtara maka ngwaọrụ ndị a. Ọ bụrụ na nke a bụ ikpe, mgbe ahụ usoro ahụ dị mfe n'ezie, ebe ọ bụ na nhazi ahụ agaghị ewe ogologo oge. Iji mee nke a, anyị ga-eji ngwa Wear OS na ekwentị.
Ozugbo ebudatara ngwa ahụ, anyị nwere ịgbalite Bluetooth na ngwaọrụ abụọ na Wear OS ngwa pịa mmalite nhazi. Mgbe ahụ anyị ga-eso usoro ndị egosiri na ihuenyo ahụ, nke mere na ngwaọrụ abụọ ahụ ga-ejikọ. Ozi ga-egosi na ihuenyo na-ekwu Jikọọ ma ọ bụ jikọọ ya, ka anyị wee mara na nke a emeworị.
Ozugbo ejikọrọ, anyị nwere ike hazi smartwatch a Na ụzọ dị mfe. Site Wear OS ngwa anyị nwere ike ime nke a na-enweghị oke nsogbu. Anyị ga-ahazi ọrụ anyị chọrọ iji na nche, nke mere na ọ dabara
Etu esi ejikọ smartwatch ndị China na gam akporo
N'oge gara aga, na ihe omume ahụ kwuru na smartwatch China enweghị gam akporo Wear ma ọ bụ Wear OS, a ghaghị iji ngwa ndị ọzọ. O di nwute, ewepu otutu n'ime ha na ulo ahia, dị ka Smart Wear ma ọ bụ MediaTek Smart Ngwaọrụ. Akụkụ dị mma bụ na e nwere ngwa ọzọ nke na-enye anyị ohere ịme usoro a, iji jikọọ elekere na ekwentị gam akporo, na mgbakwunye na ịkwụsị nsogbu nsogbu.
Ọ bụ maka Watch Droid ekwentị, nke dị maka gam akporo maka oge. Ngwa a na - enyere anyị aka ijikọ smartwatch gị na sistemụ arụmọrụ gam akporo na ekwentị iji nwee ike ịnata ọkwa site na ngwa gị, jikwaa ọkpụkpọ egwu, zipu faịlụ site na ekwentị gaa smartwatch na ọtụtụ ndị ọzọ. Iji mee nke a, anyị ga-ebudata ngwa nlele na ngwa ekwentị:
Lelee ekwentị Droid
Developer: Ngwa Lumatic
Lelee Enyemaka Droid
Ozugbo ebudatara ngwa abụọ ahụ, anyị ga-emeghe ekwentị ngwa. Ọ na-egosi anyị usoro iji soro iji jikọọ ekwentị na smartwatch China a. Yabụ n'ime usoro ole na ole anyị ga - emekọrịtarị ngwaọrụ abụọ a n'ụzọ dị mfe, nke ga - enyere anyị aka ịme elekere kacha mma.
Ezigbo ngwa smartwatch nke China
Enwere ọtụtụ ngwa nwere ike ịba uru maka ndị ọrụ nwere smartwatch ndị China, ka ha wee nwee ike ị nweta ọtụtụ uru na ya. Offọdụ n'ime ihe ndị na-adọrọ mmasị bụ:
Ngwa zuru oke maka ndị ọrụ na-apụ maka ọsọ. Ebe ọ bụ na egosiri ya dị ka ngwa ọsọ gị na ahụike, ekele nke ị nwere ndekọ zuru oke ma chịkwaa oge niile nke mgbatị gị, yana nkọwa niile dị mkpa na nke a. N'ihi ya, i nwere ike inwe ezigbo mma nsuso ekele a na ngwa.
Ndị a ma ama ọrụ akpaaka ngwa, nke na-enyere anyị aka ịhazi ọtụtụ usoro na ekwentị ma ọ bụ kwa ụbọchị. Na mgbakwunye, anyị nwekwara ike iji ya na smartwatch, maka iji zuru oke na oge niile. Ya mere, ọ bụ ngwa nwere ike ịba uru maka ọtụtụ ndị ọrụ.
Ihe omuma ozi a maara nke ọma na-ejikọ smartwatch, ka anyị wee nwee ike ịhụ ozi niile anyị natara na nche n'oge ọ bụla. Yabụ, ị gaghị echefu ọkwa ọ bụla na ya, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị pụọ ịme egwuregwu n'oge ọ bụla.
Ihe ngosi BT
Ngwa a bụ ihe a na-ahụkarị na smartwatches ndị China, ma na n'ọtụtụ ọnọdụ, ọ nwere ike ịkpata nsogbu, dị ka ọ dị na ọkwa ọkwa. Ya mere, nkwanye bụ iwepu ya na nche. Karịsịa n'ihi na kama anyị nwere ike iji ngwa ndị ọzọ ga-arụ ọrụ nke ọma, dị ka Droid Watch, nke na-enye anyị ọrụ yiri nke ahụ, na mgbakwunye na ịnwe ọrụ ndị ọzọ, nke na-agaghị akpata nsogbu na ọrụ elekere ahụ.
Ugbu a ị nwere ike ibudata Bluetooth Notifier si Google Play, ebe ọ ka dị. Ọ bụ ezie na njirimara onye ọrụ bụ ọtụtụ ihe na-adịghị mma, nke na-eme ka o doo anya na ọ bụ ngwa nke na-adịghị eme ka mmadụ kwenye ma na-enye arụmọrụ a tụrụ anya. Ọ kachasị mma izere iji ya na smartwatch nke ndị China.
Anyị na-atụ anya na mgbe obere nkuzi a gasịrị, ị nweela melite China smartwatch na nsogbu ndị na ificationsma Ọkwa e edozila. Ọ bụrụ n’ịchọtala usoro ọzọ iji dozie ahụhụ a na-akpasu iwe, ka anyị mara etu i si mee ya na nkọwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » China gam akporo » Esi edozi nsogbu notma Ọkwa na Smartwatches China
Ihe 77 kwuru, hapụ nke gị
I bu onu ahia !!! Ngwa ahụ dị mma !!
Daalụ maka ịkekọrịta ??
Echiche kacha mma?
M arụnyere nna ukwu na eziokwu bụ na ọ bụ naanị na ngwa na nke m natara a ngosi, ma nsogbu bụ na m na-enweta na ificationsma Ọkwa site na ekwentị usoro, ọ dịghị ngosi si ahazi ngwa na m na-agbalị ihe niile, M don amaghi otu esi eme ya. ihe ngosi?
Kedu ekwentị ị nwere? Otu ihe ahụ na-eme m na moto g 2014
Roberto nne dijo
Enyi enwere m nsogbu ngwa adighi amata elekere: / gini ka m g’eme
Zaghachi Roberto Encinas
hello, ị nwere ike idozi ya?
Enwere m KSIX Smart Watch, m jikọtara ya na bluetooh, ọ na-arụ ọrụ nkeji ise mbụ ma elekere BT furu efu na-egosi, ekwentị m bụ Samsung GALAXY Ace model GT558391 Android version 2.3.6.
Ana m arịọ maka enyemaka
Azụrụ m smartwatch nke China, ọ jikọtara Bluetooth nke LG Cel m zuru oke mana ọ jikọghị ya. Agụrụ m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ aro niile nke bịara, m jiri ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwa niile na enweghị ihe ọ bụla.
Mgbe m na-enyocha ntọala mkpụrụ ndụ m, agbanweela m "ọnọdụ". Agbanyere m ma dozie nsogbu ahụ. Ejikọtara ha ozugbo ma na-eji ngwa ahụ nke onye na-eche elekere tụrụ aro.
Enwere m olileanya na ahụmịhe m ga-ejere gị ozi.
Ndewo, obi dị m ezigbo ụtọ na enyemaka ahụ nyeere m aka nke ukwuu mana ọ ga-amasị m ịgbanwe ihu nke elekere m China, ihe nlereanya ahụ bụ W3, ọ ga-ekwe omume, ị nwere ike inyere m aka? Daalụ, a ga m eche ịza gị.
Zaghachi ka odi
Ọtụtụ m na-enweta ole na ole na ọ na-atụba m njehie ma ọ bụ disconnects naanị kọmputa m bụ s5
Enwere m elekere 8 na oge ọkwa ahụ dị mma, nsogbu m na-abịa mgbe ọ bịara ịhazi ya, n'ihi na enweghị ụzọ itinye ihe ọ bụla na samrtwatch
Ọ naghị arụ ọrụ na GT08S smartwatch na LG G3 ekwentị yana gam akporo 5.0 lollipop.
Enwere m One Touch Pop C7 ọ na-arụkwa ọrụ nke ọma ụbọchị ole na ole ma ọ kwụsịrị ịrụ ọrụ wee kwụpụ ọzọ.
Abel Sanabria dijo
N'ehihie, ọ na-arụ ọrụ ọkara na s5 m, yana lenovo A2010, ọ na-ada ụda naanị mana ọ nweghị ihe na-egosi
Zaghachi Abel Sanabria
Daalụ maka ntinye. O kweghi m ntinye, ọ na-enye m njehie 505 na enweghị ike itinye ya, gịnị ka m nwere ike ịme? Daalụ
Iwepu ngwa ọzọ ị nwere na ekwentị gị ejikọrọ na smartwatch ma wụnye SmartWear.
u8 nwere s7 zuru oke! Daalụ!
Arturo Xavier kwuru dijo
Enwere m S7 ma enweghị m ike ijikọ ya, ọ abụọ na njikọ ọzọ, mmadụ enwere ike inyere m aka?
Zaghachi Arturo Xavier
Otu elekere maka ndị China ọ bụla na otu China kwa elekere.
angel aragon ortega dijo
M nwere GR08 na na ificationsma Ọkwa na-adịghị ahazi
Zaghachi nye angel aragon ortega
Luis Barrios dijo
Ndewo, ị nwere ike inyere m aka, m si Venezuela, enwere m ụdị U8 ma wụnye ya na mbadamba gam akporo ma ọ bụ ngwaọrụ gam akporo ndị ọzọ na SmartWear ngwa enweghị ike ịmata ngwaọrụ U8. Ekwentị jikọtara site na Bluetooth mana na ngwa m nwetara na ọ naghị ekwu ida "SmartDevice connect Fail" Agbalịrị m ngwa niile na ọ nweghị.
Zaghachi Luis Barrios
Carolina Soto Silva dijo
Obi ụtọ n'ihi na ngwa ahụ na-arụ ọrụ dị mma maka m. Sony Xperia C4
Zaghachi Carolina Soto Silva
ezi, M nwere a1 g3 na ngwa fundo, na ihe banyere mbata nke ificationsma Ọkwa m enweghị nsogbu. Nsogbu a na abia mgbe m gbalịrị ịgụ ha na smartwatch na amaghị m ma m na-ajụ oke, mana agụọla m echiche ndị kwuru na ị nwere ike ịgụ whatsaps na ndị ọzọ. Nke bụ eziokwu bụ na m na-ahụ ụdị ọkwa m nwere, mana anaghị ekwe ka m gụọ ozi ndị ahụ n'onwe ha. Onye ọ bụla nwere ike ị nweta m USB?
Ndewo Josemi. Enwere m otu nsogbu ahụ na otu smartwatch. M na-ahụ ihe atụ na m nwere 7 WhatsApp ozi si 3 dị iche iche chats. SUV agbanyeghị na enweghị m ike ịgụ otu n'ime ha.
I jisiri ike idozi ya?
Otu ihe ahụ na-emekwa m, naanị ọkwa na enweghị m ike ịgụ ha. M na-agụ na peeji nke na ụfọdụ clocks na-adịghị eji na-agụ naanị ịgwa 🙁
APP adịkwaghị 🙁
Ndewo, ekele gị nke ukwuu maka ama ahụ, mana vidiyo ahụ adịghị. 🙁
Ndewonu Luis. Enwere m otu nsogbu ahụ otu smartwatch ahụ. You jisiri ike dozie ya? Enwere m ike ịhụ na enwere m ihe atụ ozi 7 sitere na nkata 3, mana enweghị m ike ịgụ ọbụlagodi ...
Enwere ụdị nke smartwear App maka iPhone?
Kedu ka m ga-esi nweta WhatsApp na GTO8 na iPhone?
Deiby Cobo dijo
Ndewo enyi m, ahụrụ m ajụjụ gị gbasara ma enwere ngwa iji jikọọ GT08 na iPhone, enwere m obi abụọ ọ bụla ma ọ bụrụ na ịmara otu m si ekele gị
Zaghachi Deiby Cobo
Ndewo, ehihie ọma, m nwere uwe eze kw18, m ga-achọ itinye ihu ihu. Biko ị nwere ike inyere m aka?
Ndewo, enwere m iPhone 6s, kedu ngwa m na-eji?
Nnọọ..! daalụ maka nkọwa gị. Enwere m obi abụọ. Ha abụọ pụtara na ekwentị na nche, agbanyeghị na ngwa ahụ enweghị ike ịchọta elekere. Ọ bụ U8.
M ga-enwe ekele maka azịza na-enye aka ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume. Daalụ
mgbede ọma. buru ụzọ rịọ mgbaghara ma ọ bụrụ na ajụọ ajụjụ ahụ na ebe ziri ezi (mana amaghị m ebe m ga-etinye ya) azụrụla m nwa m nwanyị smartwatch nke China ma ọ pụta na ọ nweghị Spanish, ọ ga-ekwe omume tinye ya n'ụzọ ụfọdụ. Daalụ .
Andrea olu dijo
Ndewo, enwere m A1 ma sọsọ ụda nke whatsapp na-abịarute ọ bụghị ozi ahụ, achọrọ m azịza ya
Zaghachi Cuello andrea
Lois david dijo
Otu ihe a na eme m Andrea, solve dozie ya, mee ka m mara?
Zaghachi Lois David
Guillermo Santiago dijo
My smartwash abụghị oge a na mgbe m i scanomi qr koodu ọ na-eziga m ka m kpọọ ụlọ ahịa mana ọ gaghị ekwe ka m budata ihe mbụ bt notifier. Nwere ike inyere m aka ịhụ ma ọ bụrụ na ị kwe ka m hazie ya? Daalụ nke ukwuu n'ọdịnihu.
Zaghachi Guillermo Santiago
Ndewo, anaghị m edozi ya, email m bụ andrea_itaty @ hotmail. com, achọrọ m enyemaka
Zaghachi Andrea Cuello
hello achọrọ m enyemaka, enwere m smartwatch sony 3 yana na ụfọdụ ngwa ọ na-enye m njehie echichi na otu nche biko nyere aka
Zaghachi na salomon
Morningtụtụ ọma, amaghị m ma ọ bụrụ na ọ ga-abụ ebe kwesịrị ekwesị ịme ajụjụ a, azụrụla m nwa m nwanyị smartwach nwa nwanyị ọ naghị eweta asụsụ Spanish. Enwere ike inwe ike tinye ya? .M nwere olile anya na ị ga-enyere m aka. Daalụ.
Enwere m ajuju, enwere m j7 na m nwere gt08 smartwatch na enweghị m ike ịgụ ọkwa WhatsApp, agbanyeghị ọ bụrụ na m nwere ike ịgụ ndị na-abịakwute m na facebook ozi, enwere ngwọta? Enwere m ngwa etinyere nke jiri koodu qr na nche
Enwere m obi abụọ na No.1 G3 na whatsapp iche
Enwere m ike ịhụ ọkwa na enwere m ozi na WhatsApp mana enweghị m ike ịgụ ha. Ihe ngwọta ọ bụla?
Maara KW88 Smartwatch, ị nwere ike ịgwa m ma ọ dị mma ka esere ya na mgbasa ozi nke ngwaahịa a.
Sebastian Andres Galaz Ponce dijo
Ndewo ezigbo ụbọchị 2 gara aga azụrụ m U8 smartwatch Ma enwere m nsogbu na ọkwa ahụ na-abịakwute m na m nwere ike ịgụ ha mana elekere anaghị ada ma ọ bụ na-ama jijiji mgbe ha rutere na amaghị m ihe m ga - eme ma ọ bụrụ na ha nwere ike inyere m, email m bu sebastian.galaz93@gmail.com
Zaghachi Sebastian Andres Galaz Ponce
onye ester dijo
Ndewo, azụrụ m dz09 mana ọ gaghị ekwe ka m wụnye WhatsApp ma ọ bụ facebook, ma ọ bụ ihe nchọgharị ahụ, ọ nwere mgbawa ka ọ na-arụ ọrụ n'otu n'otu site na ekwentị, mana ọ na-eziga m na ihe nchọgharị iji wụnye mana ọ na-enye njehie, onye nwere ike inyere m aka?
Zaghachi ka ester
Ndewo, ehihie ọma, biko ị nwere ike inyere m aka? Enwere m iphone na nche dz09 na-arụ ọrụ maka oku, ozi wee bịarute, mana enweghị ọkwa ọ bụla a ga-ahụ, m wee gụọ site n'akụkụ dị iche iche na ọ bụrụ na ha nwere ike, ọbụlagodi gụọ ozi ederede na Whats App, enwere m olileanya enyemaka, daalụ ekele
Adịghị m anata ificationsma Ọkwa nke ihe ọ bụla. Oku na-erute m mana whatsapps anaghị. Agbalịrịla m ngwa ahụ na ọtụtụ ndị ọzọ anaghị arụ ọrụ.Ọ na-enye akara na ọ na-ejikọ ma whatsapps anaghị abịarute: \_
Enwere m gt08 na oku na-abata mana ọkwa ahụ abụghị maka ihe ọ bụla ma ọ bụ wahtsapp ma ọ bụ ihe ọ bụla. Agbalịrị m ngwa a na ọtụtụ ndị ọzọ, ma ọ dịghị onye n'ime ha na-arụrụ m ọrụ, ahụla m ọtụtụ nkuzi, emeela m ihe niile na ọkwa ahụ na-abataghị. Daalụ.
Gbalịa Mediatek SmartDevice. M na-eme nnukwu.
Enwere m ike ịgụ wathsapp
Azụrụ m elekere smart ma enweghị m ike ịgụ ozi nke nwanne nna ọ bụla bụ Chinese. Kedu ka m si ekele gị. A CHỌRỌ M ENYEMAKA
M ahapụrụ m ozi.
Enwere m elekere, no.1 g6 na enweghị m ike ijikọ elekere na ekwentị m, enwekwara m moto g4 gbakwunyere
Anthony M Benavides L dijo
Achọrọ m onye nkuzi na elekere anya kw88 biko nyere m aka na email dranthonymbl@gmail.com
Zaghachi Anthony M Benavides L
Nnọọ. Enwere m gt08 na android 6.0.1 Enwetarala m ihe niile ngwa ma ọ naghị arụ ọrụ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-eme ka ọ mara m mana anaghị ekwe ka m gụọ whatsapp. Nyere ekele
Ndewo, enwere m k88h na ụbọchị abụọ zuru oke ... mgbe m gbanye ya, ụbọchị nke atọ na-anọgide na ihuenyo njikọ. ..na rue taa ... o nweela mmadụ? ... ị ma ka esi tọgharịa ya. Ọ bụ naanị na chive nke elekere na-eme ka nke nke ...
Enwere m otu ihe ahụ na otu ihe ahụ na-eme m
Mmadu nwere ike jikota ya na iphone ????
My dz09 ewetaghi igbanwe asusu bekee na bekee, gini ka m ga eme
Zaghachi ka iwe wee gị
ngwa ọ bụla maka smart yọj dakọtara maka android 7.0?
Zaghachi ka o doo anya
Carlos okpueze dijo
Enwere m Smart Watch q18 mana igwefoto na-egosi onyonyo ahụ ihu. Amaghị m etu esi edozi ya?
Zaghachi Carlos corona
aka nri dijo
Azụrụ Smartwartch, etinyekwala m BTNotification na ọ na-arụ ọrụ nke ọma maka m. Amaghị m onye na-elekọta ibe a, ama m na ha enweghị mmasị, ahụla m ihe m kwuru ma ha azaghị otu. Gini mere iji mee ihe ndia, ma ghara inyere aka, Would ga-eme ya maka ego? MediaTek na aru oru, mana na Wsap i huru ihe ngosi nke msg, obughi ederede ahu, nke ahu di nma. Ajuju… .. i nwere nwee ike ịgbalite ịntanetị. Mbupu kọntaktị na elekere, ma jiri ha na mkpanaka a kwụsịrị na BT?. Ajụjụ ọ bụla, m ga-aza ha. Daalụ.
Ndewo, agbalịrị m ịwụnye ọtụtụ ngwa na kọntaktị, oku na ọkwa dị mma mana enweghị m ike ịhụ ozi sitere na wassap ahụ. Ị nwere ike ị nyere m aka. Enwere m Bt2 U8
M ka zụrụ smart smart nº1 S9 mana m motorola G3 android 6 notifications anaghị arụ ọrụ. Agbalịrị m Samsung na android v. 4.2 na ee ọ n’arụ ọrụ.
Nke ahụ ọ mere onye ọzọ? ebee ka m ga-amata ihe ọzọ….
Hols Ọ ga-amasị m ịmata otu m ga-esi hụ ihe mkpofu na smartwach na SIM. Site na Bluetooth m nwere ike ime ya mana ọ bụghị site na kaadị SIM. Ọ bụ Chinese ... a DAM G3 Daalụ
Naanị m jisiri ike hazie smartwatch China m mgbe m tụlechara peeji 200 ma ọ nweghị nke ga-arụ ọrụ m. Naanị m nwetara nhọrọ Ntọala-> BT ngosi -> google play site na nche. Site n'ebe ahụ, koodu QR pụtara na ihuenyo elekere ma ana m enyocha ya na ngwa QR code nke m budatara na google play. N'ime ime nke a, m na-eziga onwe m na adreesị google play kpọmkwem nke BT ngosi, nke bụ nsụgharị nke mere ka elekere ahụ rụọ ọrụ 100%. ọ mara oke mma. Enwere m olileanya na ọ ga-enyere gị aka.
ps: ekwentị m bụ LG Bello double chip model 2015 u = na smartwatch anaghị agwa m koodu ọ bụla ma ọ bụ ihe ọ bụla. Yabụ amaghị m ụdị ma ọ bụ ụdị gị: V
Ọ naghị eji ngwa ọ bụla arụ ọrụ m, elekere ahụ bụ lemfo lf1 na ekwentị mkpanaaka bụ oneplus3.
Ugonna Nwogu dijo
Ndo, m na-agụ ihe ị kwuru na enwere m otu nsogbu ahụ, enwere m u8 smartwatch na Moto G4 na android 7.0 na enwere m ike ijikọ ya na blu Bluetooth, mana m nwara ngwa niile site na Bt notification (na ụdị ya niile), Smart Watch, Smart Watch Inyeaka, Mediatek SmartDevice, Smart Wear. Ihe ndị ahụ bụ ngwa m nwara na ihe ọ bụla, ha niile, enwetara m njehie, ụfọdụ n'ime ngwa ndị ahụ ejikọtara mana mgbe ozi ruru na ekwentị, ngwa ahụ gosipụtara njehie ma mechie na-atụghị anya ya.
Kedu ihe ị kwadoro.
Ugbu a jikọọ Smart Watch na ekwentị ọzọ na android 5.0 lollipop yana Bt ngosi ngwa (nke na-ajụ maka smart Watch) na ọ na-ejikọ n'ụzọ zuru oke ………
Zaghachi Erick Vazquez
D. Mérida dijo
N'ehihie Francisco, azụrụ m Kingwear kw88 na enwere m nsogbu ijikọ elekere m na Samsung galaxy note 4. A gbasoro m nkuzi vidio gị, mana enweghị m ike ijikọ ha na ngwa ngwa gam akporo nke na-anaghị amata elekere m, enweelarị m awụnyere ya Site na elekere ochie m, nke Sony smartwatch 3, ngwa ngwa nke gam akporo ma amaara m ya, enweghị m ike ịnweta kw88 ka ọ pụta na ndetu m iji jikọta ya. You nwere ụzọ ọzọ iji jikọta ya?
Ana m ekele gị nke ukwuu ma na-ekele gị, Abụ m onye na-eso ụzọ gị na ọwa YouTube gị.
Zaghachi D. Mérida
Ndewo, esite na Panama, akwụsịrị m nnukwu peeji gị, enwere m nsogbu na achọrọ m ịma ma ị nwere ike inyere m aka enwere m elekere manbo 2 site na ụlọ ọrụ ndụ mana m zụtara ya na China ugbu a enwere m nsogbu ngwa ahụ na enweghị m ike ịnweta otu dakọtara, wee budata ya Gịnị ka ụlọ ọrụ ahụ na-enye na ọ nweghị ihe ị ga - enyere m aka daalụ
Jose silva dijo
Ọ naghị ekwe ka m budata ngwa ahụ ma nyefee koodu ahụ, ọ na-agwa m, ma ahụghị mmewere ahụ
Zaghachi Jose silva
Enwere m smartwatch dz09 na nso nso a, etinyewo m ekwentị mkpanaaka na anaghị m enweta ịntanetị ibudata WhatsApp, facebook na twitter
Zaghachi ka pelayo
Ndewo, azụtala m DZ09 ma m nwalee ngwa niile m maara ka m nwee ike ịgụ ederede nke WhatsApp ebe ọ dọrọ m aka na ntị banyere ọkwa na onye zitere ya mana ederede ahụ enweghị oghere. Aghọtara m na na smartwatch Ee ị nwere ike ịhụ ederede nke ọkwa ahụ, n'ezie ụfọdụ. Video m huru. Na m oneplus otu m nwere usoro osage nke gam akporo arụnyere. Ọ ga-amasị m ịmata ma enwere ụzọ ọ bụla iji dozie nsogbu a. Daalụ
Rebecca Chambers dijo
Ndewo, enwere olile anya na ị ga-enyere m aka, enwere m elekere dz09 na Moto g5plus, ebudatara m ngwa ahụ ma ihe niile dị mma mana mgbe etinyere ngwa ahụ (ngwa m nwere na ekwentị apụtaworị ka ọkwa ahụ wee ruo m ), elekere na-egosi dị ka a kwụsịrị, ya bụ, ọ na-ejikọ ya na Bluetooth ma na ntọala ekwentị ọ na-apụta mana ọ bụghị na ngwa ahụ, olee otu m ga-esi edozi ya?
Enwere m nsogbu na U8, mgbe m gbanwere asụsụ na Spanish ụbọchị nke ụbọchị na-egosi na Mọnde, ụbọchị na-aga na ọnụ ọgụgụ nke ụbọchị ahụ dị mma mana ụbọchị ahụ ka bụ Mọnde, na Bekee ụbọchị ahụ na-arụ ọrụ zuru oke. maka m ma ọ bụrụ na mgbanwe. ENYEMAKA !!!!!!!
Ajụjụ m bụ na m na-eme ka amata ọkwa mana ọ bụrụ na m megharịa oku, enwere m ike were ha na nche, ọ bụghị na ekwentị ...
Enwere m dz09 mana ọ na-agbakwasị ụkwụ na m ga-ewepụ batrị ka ọ malitegharịa, ihe m hụrụ bụ na batrị na-ebu ọkụ ma ọ nwere kọntaktị ụgha.
Onwere onye mara ma nchịkọta a na - emetụta ya ịgbachi?
Amaghị m ma ọ bụrụ na mmadụ nwere ike inyere m aka na p70 smartwatch, ejiri m iji WHATSAPP PLUS maka isiokwu na ihe niile, mana elekere m anaghị anabata ozi ndị ahụ, ọ ga-abụrịrị WhatsApp mbụ ka ọ bụrụ enwe ike ịnweta ọkwa.
Onwere onye mara ngwa ma obu ihe kwe ka m nata whats with ihe WHATSAPP PLUS?
Moto Z4 bụ ukara na Snapdragon 675 na 6,4 "OLED ihuenyo
Anyị amatala ụbọchị ngosi nke Huawei Mate 30 Lite